Kordhin si loo qariyo astaamaha qaar guddiga sare ee Gnome-Shell | Laga soo bilaabo Linux
Sida caadiga ah, dhinaca midig ee dashboardka Qolofta Gnome waxaan helnaa astaamo qaar sida kan Gaaritaan, Bluetooth, Cod, Red iyo kuwa kale oo uguyaraan aniga aan loo baahnayn.
Ma jiro ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo aan ku jirin Qolofta Gnome taasi ayaa noo ogolaaneysa inaan tan sameyno, waana taas sababta aan ugu qasbanaanayno kordhin. Ma aqaano haddii laga helo goobta fidinta Gnome, sidaa darteed waxaan ku siin doonaa habka gacanta oo ah sida loo rakibo loona kiciyo.
Mar dambe ayaan dib u bilaabi doonnaa Gnome-Shell. Waxaan riixeynaa isku dhafka Alt + F2, ayaan qornay "R" iyada oo aan xigashooyinka aan bixinno gal. Waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan kordhino kordhinta Qalabka Gnome-Tweak-Tool.
Waa inaanu rakibnay qalabka dconf. Hadday sidaas tahay, waxaan dib ugu laabaneynaa isku-darka Alt + F2, ayaan qornay Tifatiraha 'Dconf-editor'. Waxaan u soconaa org »gnome» qolof »kordhinta» icon-manager iyo halbeegga sare ee baarka waxaan ku qoreynaa astaamaha aan dooneyno inaan joojino.
Xaaladdan oo kale waan joojin karnaa:
a11y (Icon Helitaanka)
Xitaa, waxaa suurtagal ah in kuwa kale la dami karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Kordhin si loo qariyo astaamaha qaar guddiga sare ee Gnome-Shell
Mar dambe ayaan dib u bilaabi doonnaa Gnome-Shell. Waxaan riixeynaa isku darka Alt + F2, waxaan qoreynaa "r" iyadoon xigashooyinka la bixin oo waxaan siineynaa gal.
Ka dib markaan raacay talaabooyinka oo aan dib u bilaabay qolofka gnome sida la tilmaamay, waxaan ka soo baxay qolofka gnome, dhamaan astaamihii ayaa ku baaba'ay baarka sare, daaqadaha ayaa hadhay iyaga oo aan haysan badhanadooda dhow, iwm.
Kale + f2 kale shaqadii way joojisay.
Si aad uga baxdo qaskaas iyo maadaama aad wali heli karto gurigaaga, adoo tirtiraya galka ay ku jirto kordhinta iyo inaad dib ugu bilowdo furayaasha boosaska Ctrl + Alt + (haddii aadan ikhtiyaarkaas firfircooneyn, dib u bilow mashiinka), waxaad dib ugu laabanaysaa miiska sidii uu ahaa.
Si aan u tirtirno galka, waxaan raacnaa wadadan - >> .local / share / gnome-shell / extensions / icon-manager @ krajniak.info
Tani waxay ka dhacday Ubuntu 11.10 oo leh Gnome Shell iyo Unity iyo Compiz oo aan la jarin.
Maxaa cabsi ah hahaha, salaan.
Ku jawaab Tex
Sidee yaab leh, waxaan ku sameeyay tan Debian Testing waxayna si fiican u shaqeysay. Waxaa laga yaabaa inay tahay wax ka yimid Ubuntu, habka, nooca Gnome ee aad haysatid?
Nooca waa Gnome 3.2.1 iyo Gnome Shell nooca 3.2.2.1, ma ahan in Elav uu yahay wax halis ah, laakiin haddii aad aragti ka hesho markii qayb ka mid ah qalabka desktop-ka la waayo, laga yaabee in Debian ay ka shaqeyso Ubuntu-na waxaa ka jira qaab kale oo ah khilaafsan kordhintaas. Salaan.